Ntuziaka maka ndị na-ere ahịa Banyere Njirimara ọgụgụ isi (IP) | Martech Zone
Ahịa bụ ọrụ na-aga n'ihu. Ma ị bụ ụlọ ọrụ na-azụ ahịa ma ọ bụ obere azụmaahịa, ịre ahịa bụ ụzọ dị mkpa iji mee ka azụmaahịa na-aga n'ihu yana yana na-enyere ndị ahịa aka ị nweta ọganiihu. Yabụ na ọ dị mkpa ịnwekọ ma debe aha nke akara gị iji wee nwee ezigbo ahia ahia ahia gi.
Mana tupu ha abịa na usoro mgbasa ozi ahịa, ndị na-ere ahịa kwesịrị ịghọta n'ụzọ zuru ezu uru yana njedebe nke akara ha. Peoplefọdụ ndị na-ewepụsị mkpa ọ dị ikike ọgụgụ isi gaa mgbasa ozi ahịa ha. N'ịmara nke ọma na ikike ikike ọgụgụ isi nwere ike ịtọ ntọala dị ukwuu maka akara ma ọ bụ ngwaahịa, anyị tụlere ụfọdụ uru ya yana uru ya.
Akụ ọgụgụ isi bụ uru gị na-asọmpi
Ikike nke ikike ọgụgụ isi dị ka patent na akara ụghalaahịa na-enye ndị na-ere ahịa ohere ịmebata ngwa ahịa ha n'ihu ọha.
Ndị na-ere ahịa enweworị otu ma ọ bụrụ na e mepụtara ngwaahịa ha patenti. Ebe ọ bụ na nchedo ikike nyere ikike azụmaahịa wepu ngwaahịa ndị yiri ya n'ahịa, ọ na - eme ka ọrụ ndị ahịa ghara isi ike. Ha nwere ike ilekwasị anya n’inweta ihe irè ahịa atụmatụ na otu esi ewebata ngwaahịa ha n'ahịa, ma ghara ichegbu onwe gị banyere karịa ma ọ bụ iti ndị asọmpi ha aka.
N'aka nke ọzọ, nchebe ụghalaahịa na-akwado ma na-enye ntọala maka mkpọsa ahịa. Ọ na-enye ụlọ ọrụ achụmnta ego ikike zuru oke maka njirimara, aha, aha, imewe, were gabazie. Trademark na-echebe aha na onyinyo nke ika gị site na igbochi ndị ọzọ na-erigbu akara gị. Akara nwere ike ịbụ ihe nchọpụta maka ndị ahịa ịmata ngwaahịa gị n'ahịa. Site na ịnwe nchebe ụghalaahịa na ebe, ị nwere ike ijide n'aka na agbanyeghị mkpọsa ahịa ma ọ bụ atụmatụ ị na-eme, ọha na eze na-anata ozi kwekọrọ na ogo ngwaahịa gị n'ahịa.
Dịka ọmụmaatụ, onye mepụtara batrị abụghị ezigbo ọrụ maka batrị etinyere gbawara. Agbanyeghị, ndị ahịa agaghị enwe ike ịchọpụta na etinyere batrị ahụ n’ihi na enwere ike ịhụ akara ngosi gị na ngwaahịa a. Ozugbo onye ahịa ahụ nwere ahụmịhe ọjọọ na ngwaahịa, ọ ga-emetụta mkpebi nzụọ ahịa ha ma ha nwere ike gbanwee ụdị ndị ọzọ maka ụzọ ọzọ. Ya mere, ọ na-enweghị nkwupụta na patent na ụghalaahia nchebe bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa maka mgbasa ozi ahịa na-aga nke ọma.
Nyochaa Akụ ọgụgụ isi nke Ndị Na-asọmpi Gị
Ndị na-ere ahịa kwesịrị ịma na azụmaahịa ga-ebu ụzọ mee nchọpụta ikike ma ọ bụ ụghalaahịa tupu ha tinye akwụkwọ maka patent ma ọ bụ akara ụghalaahịa na United States Patent na Trademark Office (USPTO). N'oge a, ndị na-ere ahịa kwesịrị itinye aka na ya n'ihi nsonaazụ nke patent ma ọ bụ ụghalaahịa nwere ike ịnye ozi dị mkpa enwere ike iji chepụta atụmatụ ahịa dị irè. Ihe omuma oha na eze banyere ihe omuma nke oma bu ngwa ahia ahia nke oma ka ichoputa ndi ozo.
Ebe ọ bụ na ngwa ngwa na-ebukarị ngwa ngwa site na ụlọ ọrụ azụmaahịa, ịnwere ike ịchọ ụlọ ọrụ na-emepụta ngwaahịa ndị metụtara ya ma ọ bụ n'ụzọ yiri ya. Site n'ime nke a, ị ga - enwe ike ịma ike na ọgaghị nke ngwa ahịa gị n’ahịa tupu ị bido mewe mkpọsa maka ya.
Inwe nghọta banyere etu esi eme nchọpụta nchọpụta bara uru maka azụmaahịa azụmaahịa yana. Will ga-enwe ike ịchọpụta azụmaahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị nwere ike irite uru na ngwaahịa gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa na-emepụta microscope elektrọnik, ị ga-enwe ike ịchọ ụlọ ọrụ ndị ọzọ metụtara ngalaba ọrụ ahụ.
Nsonaazụ nke nchọpụta ikike ọkachamara tinyere echiche iwu sitere n'aka Onye Ọkachamara Patent bụ ihe onye ọ bụla na-azụ ahịa na onye ọchụnta ego / ọchụnta ego kwesịrị ịnata (ma ghọta nke ọma) tupu ịga n'ihu na ihe ha mepụtara.
JD Houvener nke Ihe eji eme ihe
Gbochie Iwu Iwu IP
Ọ dị mkpa ịmata ụfọdụ ihe bụ isi nke iwu ọgụgụ isi tupu ịre ngwaahịa gị maka ebumnuche azụmahịa. Ime otu a, ị ga - enwe ike izere ndọghachi azụ azụmaahịa yana ịgba akwụkwọ dị oke ọnụ metụtara ịda iwu.
Banyere ikike nwebisiinka, ọtụtụ ndị na-ere ahịa amaraworị ụdọ na oke nke iwu nwebisiinka mgbe a bịara n'ihe akụrụngwa. Iji oyiyi, videos, soundbites, music, wdg na ị dị nnọọ Google ma ọ bụ chọọ na ọzọ search engine nwere ike itinye azụmahịa gị n'ihe ize ndụ. Ya mere, ị ghaghị ijide n'aka na ọrụ okike ị na-eji maka ihe ahịa gị nwere onwe ya na nwebisiinka ma ọ bụ onye okike / onye edemede nke ọrụ ahụ na-enye gị ohere iji ya maka ebumnuche azụmahịa. N'ụzọ dị otú a, ịnwere ike izere ịda iwu na ịkwụ ụgwọ maka ịgba akwụkwọ.
Banyere patent ma ọ bụ ụghalaahịa, ịmara usoro nyocha nwere ike inyere ndị na-ere ahịa aka izere iwu mmebi iwu. Ebe ọ bụ na usoro ntinye na ndozi ahụ nwere ike ịbụ ntakịrị ntakịrị, ndị nwe azụmaahịa na-akwụkarị ụghalaahịa ma ọ bụ patent ọka iwu iji nyere ha aka. Na ederede ahụ, ndị na-ere ahịa dị ka gị mkpa itinye aka na nchebara echiche maka usoro a ka ị nwee ike ị nweta atụmatụ ahịa kachasị mma nke na-agaghị etinye azụmahịa gị n'ihe egwu.
Tinye akwukwo IP na-achoghi
Tags: obi ike ipnwebisiinkaikike ibipụta yaarịa ọgụgụ isiikike ọgụgụ isiiwu ipJD HouvenerJD Houveneriwuiwupatentpatent iwuedenyere